Fomba fampiasana ny vidin'ny algorithmika hampitomboana ny tombom-barotra Martech Zone
Zoma, Febroary 12, 2016 Zoma, Febroary 12, 2016 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra marika tsy miankina anao, ny tanjonao dia ny hampitombo ny tombom-barotra amin'ny vokatra marika manokana anao. Ny vidiny no singa manandanja indrindra hijerena ny tombom-bolanao - ary noho izany mila ny sainao feno. Fa ahoana no ahalalanao tsara fa tsy manome vidiny ambany loatra ny vokatra marikao manokana ianao?
Mety hamela vola eo ambony latabatra izay tsy fantatrao ianao. Na mety lafo loatra ny vidinao ary tsy miteraka varotra betsaka araka izay tratranao. Na dia marika manokana aza ny fomba fampitomboana ny orinasanao amin'ny tontolon'ny mpivarotra an-tserasera ankehitriny, ny mijanona mialoha ny fifaninanana no lakilen'ny fahombiazanao
Ny vahaolana momba ny vidin'ny marika manokana an'ny feedvisor dia natao manokana ho an'ireo mpivarotra marika tsy miankina - toa anao. Ny algorithma fianarinanay mandeha ho azy dia hanampy anao hampitombo ny tombom-barotra ho an'ny vokatra marika manokana, izay hanafainganana ny fitomboan'ny orinasanao manokana.
Maninona ianao no mila manisy vidiny algorithmika ho an'ny vokatra marika manokana
Tombom-barotra optimum - Tsy mila maminavina ny vidinao intsony ianao. Ny vidin'ny algorithmika dia manafoana ny mety hametrahanao vola eo ambony latabatra amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny vidiny marina mba hiantohana ny tombom-barotra tsara indrindra ho an'ny vokatra marika manokana anao.
Time-mamonjy - Tsy mila mametraka ny vidinao intsony ianao. Ny fitantanana ny vidiny isaky ny vokatrao dia mandany fotoana be, ary mety handany ora maro amin'ny andronao. Hatramin'izao, mbola tsy nisy vahaolana momba ny vidin'ny vidin'ny marika manokana. Ny vahaolana mandeha ho azy dia manafaka ny fotoananao mba hahafahanao mifantoka amin'ny famenoana, ny scouting ary ireo hetsika ilaina ilaina hafa mba hanafainganana ny fitomboan'ny orinasanao manokana.
Fanaraha-maso sy fitoniana - Manana fifehezana ny tahirinao sy ny tsena ianao.
Ao amin'ny habaky ny mpivarotra Amazon tsy fantatra mialoha - voafehinao tanteraka ny haingana na ny faharetany mivarotra ny vokatrao - miankina amin'ny toe-javatra misy anao manokana.
Ahoana ny fiasan'ny vidin'ny algorithm?
Tsy ilaina ny mampiditra lalàna na mamantatra ireo vokatra momba izany. Ny algorithms fianarantsika samirery dia miditra raha vantany vao miditra ny vidin'ny valindrihana sy ny vidin'ny gorodonao ianao, ary ny sisa rehetra dia mandeha ho azy.
Azonao atao ny mametraka daty ivelan'ny tahiry lasibatra na milaza aminay hoe ohatrinona ny entana tianao amidy isan'andro.
Daty tsy misy tahiry kendrena - Lazao aminay ny daty kendrenao ivelan'ny-tahiry, ary ny algorithmanay dia hamaritra ny vidiny mirary sy ny hafainganana amin'ny varotra izay hiantoka anao hivarotra amin'ny daty.
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]ohatra: Raha toa ianao ka mahazo tahiry vaovao avy amin'ny mpanamboatra anao amin'ny voalohan'ny volana ho avy ary mila manala ny tahirinao amin'izao fotoana izao, ampahafantaro anay fotsiny ny daty marina ary hohamarininay fa tsara indrindra ny tahirinao. vidiny mety, alohan'ny hidiran'ny stock vaovao. [/ boaty]
Kendrena amin'ny hafainganam-pandeha - Hamarino tsara fa tsy mivarotra haingana loatra ianao na mikatona amin'ny lisitra miadana miadana. Lazao aminay hoe firy ny entana tianao amidy isan'andro, ary avelao hikarakara ny ambiny ny algorithmanay.
[box type = ”note” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”] Ohatra: Niakatra ny filan'ny tsena ary mivarotra zavatra betsaka kokoa noho izay noeritreretinao ianao. Amin'ity taha ity, hivarotra ianao ao anatin'ny herinandro fa ny tahirinao vaovao dia tonga ao anatin'ny tapa-bolana ihany. Aza atao very ny laharam-pejy azonao antoka fa tsy hivarotra ianao mandra-pahatonganao ao anaty tolotra vaovao. Fehezo ny hafainganan'ny varotrao amin'ny filazanao aminay hoe ohatrinona ny entana tianao amidy isan'andro. [/ Boaty]
Tombontsoa fanampiny ho an'ny mpanome torohevitra
Amin'ny maha-ampahany azy Fonosana marika manokana an'ny mpanome hevitra, hahazo ihany koa ianao:
ny efitrano fitsikilovana orinasa - misy dashboard intuitive, tatitra lalina ary fanairana isan'andro hanampy anao handray fanapahan-kevitra ara-barotra marina:
Ny solaitrabe manolotra topy maso lehibe sy fahaiza-manao antsitrika lalina, manome anao fandinihana be dia be momba ny vidinao, ny varotrao, ny tahirim-bola ary ny toeran'ny tsena.
Ny tatitra ataonay asongadino ireo angon-drakitra manankarena izay azonao zahana sy diceo arakaraka ny masontsivana samihafa, mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasanao.
Ireo fanairana asongadino ireo fampahalalana tena ilaina, toy ny rehefa tsy mahasoa intsony ny entana manokana, rehefa lany ny entana lafo indrindra aminao, ary rehefa tokony hanafoana ny lisitra miadana ianao.
A mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa natokana iza no hitarika anao amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao manokana. Ny ekipan'ny fahombiazan'ny mpanjifanay dia voaforon'ny manam-pahaizana any Amazon sy ny manam-pahaizana momba ny fitantanam-bola - mba hahafahanao matoky fa eo an-tànana ankavanana ianao.
Jereo hoe inona no afaka ahatratra ny mpanentana amin'ny orinasanao marika tsy miankina Amazon!
Hanafaingana ny orinasanao marika tsy miankina Amazon
Tags: algo-Pricingvidin'ny algorithmmpanome sakafo